“Haddii uu Neymar ku biiro Real Madrid, maahan qiyaano uu ku sameeyay Barcelona” – Gool FM
(Spain) 14 Agoosto 2019. kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, ayaa ah kuwa ugu cad cad ee ku tartamaya waqtigan inay helaan adeega Neymar Jr, balse midkoodna wax heshiis ah ma uusan la gaarin PSG ilaa iyo haatan.
Halyeeyga kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa diiday in xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Neymar Jr lagu tilmaamo inuu yahay qiyaanoole, hadii ay dhacdo inuu ku biiro Real Madrid inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Rivaldo ayaa aaminsan in haddii uusan Neymar Jr inta uu ka soo dhaqaaqo Barcelona si toos ah ugu biirin kooxda Real Madrid aanu lagu tilmaami Karin khaa’in, marka loo fiiriyo in laba xili ciyaareed uu u soo ciyaaray kooxda Paris Saint-Germain, waxaana jira ciyaartoy badan oo sidaas sameeyay, waxaana ka mid ah halyeeyga reer Brazil ee Ronaldo.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Haddii uu Neymar heshiis u saxiixo Real Madrid, uma arko inay tahay qiyaano uu ku sameeyay Barcelona, wuxuu u dhaqaaqay Paris Saint-Germain kaddibna wuxuu ku biiri doonaa Madrid, taasi maahan u wareegitaan toos ah, mana ahan arrin qiyaano ah aniga ahaan”.
“Paris Saint-Germain ma aqbali doonto dalab xun oo kaga yimaada Barcelona kaliya sababa la xiriira in Neymar Jr uu doonayo inuu ku laabto, kuma qasaarin doonaan lacago, mana ogolaan doonaan hadii uusan dalabka aheyn mid ku haboon”.
“Waxaan door bidayaa inuu heshiis cusub u saxiixo Barcelona, sababtoo ah waa meesha uu ku faraxsanaa marka uu joogay, laakiin taasi waxay kuxirantahay dalabka ay ka soo gudbiso Barca”.
Sidee ayay noqon kartaa shaxda kooxda Chelsea ay caawa kala hortagayso Liverpool?